Dagaal qaraar oo ka socda Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ENGLISH
Dagaal qaraar oo ka socda Dhuusamareeb
Kooxda duullaanka ah waxa ay ka amar qaataan, Sheekh Shaakir oo xilli ahaa sheekh caan ah, aadna looga jecelaa gayiga Soomaalida oo dhan, hayeeshee, hadda u muuqda kutubo xoor aakhiro sheeg ah, kaas ku gambashada diinta ku daadinaya dhiigga shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kooxda Ahlu-sunna ee fadhigoodu yahay degaanka Bohol, ayaa saaka weerar ku qaaday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaasoo uu hadda ka holcayo dagaal qaraar oo u dhaxeeya Ciidanka Dowladda iyo kuwa Galmudug oo isku saf ah iyo kooxda duullaanka ah ee ASWJ.
Dagaalka xooggiisa ayaa ka socda xaafadaha Waabari iyo Waxara-cade, halkaasoo ay fariisimo ku meel gaar ah ka sameysteen ciidanka taabacsan Koox diimeedka ASWJ, oo hore looga fara maroojiyay degmooyinka Matabaan, Guriceel iyo Dhuusamareeb.
Sida ay sheegayaan wariyayaal madax bannaan oo ku sugan Dhuusamareeb, waxaa dagaalka ku biiray Ciidanka ATMIS iyo kuwa Gorgor ee ku sugan Dhuusamareeb, waxayna labada dhinac isku adeegsanayaan hubka nuucyadiisa kala duwan.
Guddoomiye ku-xigeenka magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug Cabdi Xaashi, oo saxaafadda la hadlay, ayaa sheegay iney magaalada ka saareen kooxda duullaanka soo qaadday, hayeeshee, dagaalka ayaa wali si xooggan uga socda magaalada.
Dhanka kale, saraakiisha hoggaamineysa ciidanka taabacsan Ahlusunna, ayaa dhankooda guulo ka sheegtay dagaalka, hayeeshee, dadka degaanka ayaa KON, u sheegay in xabaddu wali ka dhacayso halkii ay ka billaabatay saaka salaaddii subax kadib.
Dhowr jeer, waxaa hoggaanka kooxdaas ee Shaakir iyo Maxamuud lagu eedeeyay in ay siyaasiyiin fadhigoodu yahay Garawe, uga shaqeeyaan, daadinta dhiigga, burburnta degaanka, barakicinta danyarta iyo baabi’inta nidaamka dowladnimada Galmudug.
Si aan qarsoodi lahayn waxaa dhaawacyada ciidanka ASWJ, daaweysa Puntland, isla-markaana siisa hubka iyo rasaasta lagu dhibaateynayo Galmudug. Puntland, waxa ay muddo fog ka soo hor jeedday dhismaha Hobyo oo markaan qalabka loo qaatay.
Duullaanki uu Shaakir ku qaaday Guriceel, October 2021, waxaa ku dhintay saraakiishii ugu mihiimsanaa ciidanka ka howlgala Galmudug, sida Taliyihii Ciidanka Danab ee Galmudug iyo hoggaan kale oo muhiim ah, halka uu qaxiyay in ka badan 100,000 oo qof oo dhn yara.
U jeedkiisu wuxuu ahaa in aysan doorasho ka dhicin Dhuusamareeb, maamulkuna ka cararo Caasimadda, mar kale, wuxuu doonayaa inuu carqaladeeyo amniga degaannada si uusan u hirgalin qorshe kasta ooh or marineed.